‘सरकार चुनावका लागि सिन्को पनि नभाच्ने तर उल्टै प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने ?’ - USNEPALNEWS.COM
‘सरकार चुनावका लागि सिन्को पनि नभाच्ने तर उल्टै प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने ?’
काठमाडौं । पूर्वसभामुख तथा नेकपा एमाले संस्दीइ दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधान संसोधनका नाममा चुनाव र संविधान कार्यान्वयन सरकारले रोकेको आरोप लगाएका छन् । उनले सत्तापक्षभित्रको विवाद भएका कारण संविधान संसोधन अड्कीएको दावी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कमा ऋषि धमलासँग नेपाली बहसमा कुराकानी गर्दै उनले संविधान संसोधन आबश्यक परे गर्नुपर्छ तर अहिले आबशयक नभएको बताए । उनले ९० प्रतिशतले जारी गरेको नेपालको संविधान जाति भाषा, लिङ्ग सबैको सहमतिको दस्तावेज रहेको दावी गरे । सरकारले चुनाव घोषणा गरे लगत्तै संविधान संसोधनका विषयको छलफल अगाडी बढ्न सक्ने बताए ।
सरकारले चुनाव नचाहेका कारण नै ठूलो समस्या भएको बताए । ’ धमलाको प्रश्नमा उनले भने ‘सरकार चुनावका लागि सिन्को पनि नभाच्ने तर तपाई उल्टै प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने ? सरकार चुनाव चाहान्न भन्ने कुरा संसद फागुन १० गते पुरयाएको कुराले प्रष्ट पारेको छ । त्यसमा धेसी दलो पनि मिलेमतो छ । तपाई उल्टै प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने ? ’ पूर्व सभामुख नेम्वाङले चुनाव गर्ने दायित्व भएको सरकारले सरकारले चुनाव गर्न सिन्को नभाच्दा पनि एमालेमाथि प्रष्ट गर्नुको औचित्य नभएको बताए । नेम्वाङले सरकार चुनाव बाट भागि रहेको र चुनाव नगराउने सरकारो आचित्य नभएको पनि बताए ।
उनले संविधान संसोधन के का लागि ? किन ? भन्ने विषयमा अझैसम्म पनि प्रष्ट नभएको त्यो प्रष्ट भएपछि एमाले तयार हुने बताए । मधेसका जनाताको माग भनेर ७ प्रतिशतको कुरालाई बाँकी नागरिकमाथि लाद्न नसकिने बताए । नेम्वाङले नेपाली जनताले ७० वर्षदेखि नयाँ संविधानको जुन चाहना गरेका थिए त्यो चाहना आफूहरूले संविधानसभाबाट पूरा गराएको चर्चा गरे। ‘एन जना मात्रैको असन्तुष्टि भएपनि संविधान संसोधन गरौ ’ उनले भने, तर ९० प्रतिशत भन्दा बढीको सहमति र सम्झौतामा बनेको संविधानमा अरुका कुरा कसरी पार्ने ?
धेरैले यो संविधानलाई स्वीकार गरेको र थोरैले मात्र संविधान आफू अनूकूल नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहँदा ९० प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरबाट अनुमोदित भएको यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट रहेको उनको दाबी थियो।
संविधानको ८० प्रतिशत काम पहिलो संविधानसभाले गरेको र त्यसमा मधेसवादी दलको पनि पूर्ण सहयोग रहेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले पाँचवटा विषयमा असहमति जनाएर संविधानलाई नै अस्वीकार गर्न नहुने बताए।
पहिलो संविधानसभाको कामलाई स्वामित्व लिँदै नयाँ संविधान बनेको स्पष्ट पार्दै सभामुख नेम्वाङले वर्तमान संविधान प्रगतिशील, जनमैत्री र समावेशी भएको दावी गरे।
संविधान गतिशील र परिवर्तनशील हुने भएकाले असहमतिका बुँदालाई जनताका चाहना र भावनाबमोजिम संशोधन गर्दै लैजान सकिने उहाँको भनाइ थियो । सभामुख नेम्वाङले संविधानको कार्यान्वयनलाई सहज र सफल बनाउन दलबीचको एकता अभैm बलियो हुनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
रक्की माउन्टेन फ्रेन्ड अफ नेपालका अध्यक्ष त्रीपाठीद्वारा सम्पूर्ण कोलोराडो बासीलाई धन्यबाद ज्ञापन
ट्रम्प प्रशासनले गर्ने उत्तर कोरियासँगको वार्तामा ‘ खतरा’ : क्लिन्टन
यूस नेपाल न्युज	 March 11, 2018